Filannoon haaraan filannoo jirutti dabalama. Firiin isaa filannoo baay'edha.
Gareen barruu filaman.
Sirnoota fooddawwan irratti, Furtuu Alt gadqabuu dandeessa weyta garee barruu filuuf harkisuu dandeenya. Haalata filannoo garee galchuu si hin barbaachisu.
Title is: Haalata Filannoo